အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများ - ခရစျ၏ချာ့ ... ဤလူအဘယ်သူနည်း
ဤလူများမှာအဘယ်သူသည်ခရစ်တော်၏ချာ့ ... ?
ဂျိုး R. ဘားအားဖြင့်
သငျသညျဖြစ်ကောင်းခရစ်တော်၏အသင်းတော်များ၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ ထိုအဖြစ်ကောင်းသင်သည်ဤလူများမှာအဘယ်သူသည် "ဟုမေးင့်အဘယျသို့ - ဘာမှမပါလျှင် - ကမ္ဘာ့အခြားအသင်းတော်များ၏ရာပေါင်းများစွာမှသူတို့ကိုခွဲခြား?
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 20,000 သန်းတစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ဝင် 21 /2စုစုပေါင်းနှင့်အတူခရစ်တော်၏အသင်းတော်များ၏အချို့3အသငျးတျောမြားမြားရှိပါသညျ။ နှင့်တထောင်အများအပြားအဖွဲ့ဝင်တက်လုပ်ကြီးမားတဲ့သူတွေကို - အနည်းငယ်အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည်ဟုသေးငယ်တဲ့အသငျးတျောမြားရှိပါတယ်။
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်၌ကိန်းဂဏန်းအစွမ်းသတ္တိ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုဥပမာခန့် 40,000 အဖွဲ့ဝင်များ Nashville, Tennessee ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တချို့ 135 အသင်းတော်ရှိပါတယ်ရှိရာ, တောင်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်ရှိ၏။ သို့မဟုတျ, 36,000 အဖွဲ့ဝင်များ 69 အသင်းတော်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရှိပါတယ်ဘယ်မှာရှိ Dallas, Texas ပြည်နယ်အတွက်။ နှင့်အခြားသူများ - - Tennessee ပြည်နယ်, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, ဥက္ကလာဟိုးမား, Alabama အဘိဓါန်, ကီကဲ့သို့သောပြည်နယ်များအတွက်လက်တွေ့ကျကျတိုင်းမြို့မှာခရစ်တော်၏အသင်းတော်မျှဘယ်လောက်ပဲကြီးမားသို့မဟုတ်သေးငယ်ရှိသေး၏။
အသင်းတော်အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ကိုတခြားနေရာတွေမှာဒါမြောက်မြားစွာမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်, ခရစျ၏အသင်းတော်များအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် 109 အခြားနိုင်ငံများတွင်တိုင်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိပါတယ်။
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များ၏အဖွဲ့ဝင်များကိုပွနျလညျထူထောဝိညာဉျကိုတစ်ဦးကလူများမှာ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်မူလဓမ္မသစ်ကျမ်းဘုရားကျောင်း restore လိုသော။
ဒေါက်တာပညာရှင် Hans Kung-တစ်ဦးလူသိများတဲ့ဥရောပဘာသာရေးပညာရှင်, အဆိုပါဘုရားကျောင်းပိုင်ခွင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာ Kung-ယင်းထူထောင်ဘုရားကျောင်းက၎င်း၏လမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမြည်တမ်း; အစဉ်အလာနှင့်အတူဆင်းဝန်ကိုထမ်းဖြစ်လာပြီ ခရစျတျောကဖြစ်သင့်စီစဉ်ထားသောအရာကိုဖြစ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
တစ်ခုတည်းသောအဖြေကိုဒေါက်တာ Kung-သည်နှင့်အညီ, အသင်းတော်က၎င်း၏အစအဦး၌ရှိ၏ဘယ်အရာကိုမြင်ပြန်ကျမ်းစာလာသည်သွားကြဖို့, အဲဒီနောက်နှစ်ဆယ်ရာစုအတွက်မူရင်းအသင်းတော်၏အနှစ်သာရ recover ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာခရစ်တော်၏အသင်းတော်များလုပ်ဖို့ရှာကြသည်တယျ။
အဆိုပါ 18th ရာစုနှောငျးပိုငျးတှငျ, ကွဲပြားခြားနားသောဂိုဏ်းဂဏ၏ယောက်ျား, လွတ်လပ်စွာအချင်းချင်း၏လေ့လာနေ, ကမ္ဘာ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများထဲတွင်မေးရန်စတင်ခဲ့:
-Why ပထမရာစုဘုရားကျောင်း၏ရိုးရှင်းနှင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့နောက်ကျော denominationalism ကျော်လွန်မသွား?
-Why တစ်ဦးတည်းကမျြးစာကိုယူမနှင့်နောက်တစ်ကြိမ် "တမန်တော် '' ဒေသနာ၌စေ့စေ့ ... " ကိုဆက်လက် (တမန်တော် 2: 42)?
ပထမရာစုကခရစ်ယာန်တွေကိုစိုက်ပျိုးကြောင်း, သူတို့ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်သာခရစ်ယာန်တွေဟာဖြစ်: -Why အတူတူပင်အမျိုးအနွယ်ကို (8 ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်, လုကာ 11) စိုက်သည်မဟုတ်လော
သူတို့က, denominationalism ချွတ်ပစ်ရန်လူ့ဘာသာအယူဝါဒရှိသူမတူညီပစ်လိုက်, သာကမျြးစာကိုလိုကျနာဖို့လူတိုင်းနဲ့တောင်းပန်ခဲ့သည်။
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များ၏အဖွဲ့ဝင်များကဒီချဉ်းကပ်မှုအကြောင်းကိုစိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောလမ်းညွှန်အဖြစ်ကျမ်းစာနဲ့ကျနော်တို့မူရင်းဘုရားကျောင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ဘယ်အရာကိုရှာဖွေအတိအကျကြောင့် restore ငှါရှာကြံကြ၏။
ကျနော်တို့မောက်မာ, ဒါပေမယ့်အလွန်ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်ဤမမြင်မိပါဘူး။ ကျနော်တို့လူသားတစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းက-သျောလညျးဘုရားသခငျရဲ့အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုလိုက်နာမှယောက်ျားပဌနာပြုမှသာညာဘက်ယောက်ျားရဲ့သစ္စာအဘို့အမေးရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်မချွေတာကြပါတယ်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့လူလုပ်ဘာသာအယူဝါဒရှိသူမတူညီစိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်ရိုးရိုးဓမ္မသစ်ကျမ်းပုံစံပါ။ ကျနော်တို့ကတန်အဖြစ် --nor ကက်သလစ်, ပရိုတက်စ, သို့မဟုတ် Jewish အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုပဋိသန္ဓေ ယူ. မရကြဘူး - ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသညျယရှေုကိုထူထောင်နှင့်အရာအဘို့အသေလေ၏သောဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်။
ကျနော်တို့သူ၏နာမကိုဝတ်ဆင်ဘယ်ကြောင့်ထိုစကားမစပ်, ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဝေါဟာရကို "ခရစ်တော်၏အသင်းတော်သို့" တစ်ဂိုဏ်းသတ်မှတ်ရေးအဖြစ်မဟုတ်ဘဲအသင်းတော်သည်ခရစ်တော်၏ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းညွှန်ပြနေတဲ့ဖော်ပြရန်အသုံးအနှုန်းအဖြစ်အသုံးပြုမပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချို့ယွင်းချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန် - နှင့်ဤဂရုတစိုက်ဘုရားသခငျသညျဘုရားကျောင်းဘို့ရှိပါတယ်သည့် All-လုံလောက်သောနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာလိုသောအဘို့ရှိသမျှကိုပိုပြီးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာကအပျေါ အခြေခံ. စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး
ဘုရားသခငျသညျခရစျတျောထဲမှာ "ခပ်သိမ်းသောအာဏာ" (မဿဲ 28: 18) အပ်နှင်းထားပြီးကတည်းက, သူသည်ဘုရားသခင့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကယနေ့ (ဟေဗြဲ 1: 1,2) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကတည်းက, ကသာခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ဖြစ်၏ဘယ်သို့ဆိုဖို့အခွင့်အာဏာရှိပြီးအဘယျသို့လုသောငါတို့ခံယူချက်ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်သင်ပေးသင့်တယ်။
သာဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်သူ၏တပည့်ခရစ်တော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထွက်သတ်မှတ်ကတည်းကနှင့်အညီ, တစ်ဦးတည်းကအားလုံးကိုဘာသာရေးသင်ကြားရေးနှင့်အလေ့အကျင့်များအတွက်အခြေခံအဖြစ်အစေခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာခရစ်တော်၏အသင်းတော်များ၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲဓမ္မသစ်ကျမ်းမဩဝါဒပေးခရစ်ယာန်တွေဟာဖြစ်လာမှအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဦးဆောင်လမ်းပြရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ကျနော်တို့ဘာသာရေးခွဲခြားမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ယရှေုသညျစညျးလုံးညီညှတျမှု (ယောဟန် 17) အတွက်ဆုတောင်းလေ၏။ နောက်ပိုင်းတွင်တမန်တော်ပေါလုသည်ခရစ်တော်၏ (1 ကောရိန္သု 1) တွင်စည်းလုံးခွဲဝေခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုတောင်းပန်။
ကျနော်တို့စည်းလုံးမှုအောင်မြင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကမျြးစာကိုတစ်ဦးအပြန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်ယုံကြည်ပါတယ်။ အပေးအယူစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆောင်ကြဉ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ နှင့်ဧကန်အမှန်အဘယ်သူမျှမလူတစ်ဦး, မပုဂ္ဂိုလ်များ၏အုပ်စုလူတိုင်းလိုက်နာရမည်သောစည်းမျဉ်းများအစုတခုတက်ဆွဲရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သော်ထိုသို့ဆိုလုံးဝသင့်လျော်သည် "ရဲ့ရုံကမျြးစာကိုအောက်ပါတို့ကစည်းလုံးညီညွတ်ကြပါစို့။ " ဒါဟာတရားမျှတတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှန်သည်။
ကမျြးစာကိုအပေါ်မှာအခြေခံဘာသာရေးစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတို့အတွက်တရားတွေ့တော်မူသည်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်တို့အားဒီတော့။ ကျနော်တို့မဆိုဓမ္မသစ်ကျမ်း command ကိုနာခံဖို့, ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းများကထောကျမအလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့ add သို့မဟုတ်ညျဘုရားသခငျ၏သွန်သင်ချက်ထဲကနေပယ်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းလိုက်နာဖို့ငြင်းဆန်ရန်, ဓမ္မသစ်ကျမ်းထက်အခြားမည်သည့်အယူဝါဒစာရင်းသွင်းဖို့ကယုံကြည်ကြသည်။ နှင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်နုတ်နှစ်ဦးစလုံးကမျြးစာကို (; 1 ဗျာဒိတ်ကျမ်း69-22 ဂလာတိ 18,19) တွင်ပြစ်တင်ရှုတ်ချနေကြသည်။
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များကျြမှောကျခတျေစည်းရုံးရေးဗျူရိုကရေစီ၏ထောင်ချောက်အဘယ်သူအားမျှရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမအုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်ရှိပါတယ် - ခရိုင်, ဒေသဆိုင်ရာ, အမျိုးသားရေးမဟုတ်သလိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမဟုတ် - အဘယ်သူမျှမမွကွေီးဌာနချုပ်နဲ့အဘယ်သူမျှမ-ဒီဇိုင်းအဖွဲ့အစည်းက။
တစ်ခုချင်းစီကိုအသငျးတျောကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖြစ်ပါတယ် (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်) နှင့်သည်အခြားအသငျးတျော၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အတူတကွအသင်းတော်များစွာချည်နှောင်ထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောလည်စည်းခရစ်တော်နှင့်သမ္မာကျမ်းစာတစ်ဘုံသစ္စာဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမစည်းဝေးကြီးများ, နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများ, မတာဝန်ရှိသူတဦးကစာပမြေားရှိပါတယ်။ အသငျးတျောမြားစသညျ, သားသမီးရဲ့အိမ်တွေကိုထောက်ပံ့အတွက်သက်ကြီးရွယ်အိုများ, မစ်ရှင်အလုပ်အတွက်နေအိမ်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ပြုပါသို့သော်ပါဝင်မှုတစ်ဦးချင်းစီကိုပရိသတ်အစိတ်အပိုင်းအပေါ်တင်းကြပ်စွာမိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်မျှမလူတစ်ဦးမဟုတ်သလိုအုပ်စုတစ်စုမူဝါဒများထုတ်ဝေသို့မဟုတ်အခြားအသင်းတော်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုပရိသတ်အင်္ဂါတို့တွင်မှရွေးချယ်ထားသောအသက်ကြီးသူတစ်ဦးဗဟုသဖြင့်ဒေသအလိုက်အုပ်ချုပ်သည်။ ဤရွေ့ကား 1 တိမောသေ3နှင့်တိတု 1 ၌ပေးသောဒီရုံးများအတွက်တိကျသောအရည်အချင်းများဖြည့်ဆည်းသူကိုလူဖြစ်ကြ၏။
ထောကျမြားတစ်ဦးချင်းစီအသငျးတျော၌လည်းရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကား 1 တိမောသေ3၏သမ္မာကျမ်းအရည်အချင်းများဖြည့်ဆည်းရပါမည်။ ငါ
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်၌ဝတ်ပြုမှုငါးခုပစ္စည်းများ, ပထမရာစုအသင်းတော်၌ကဲ့သို့တူညီသောအတွက်အဓိက။ ကျနော်တို့ပုံစံကအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ယရှေုက "ဘုရားသခငျသညျစိတျဓာတျဖြစ်ပြီး, ထိုသူကိုပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကိုစိတျဓာတျနဲ့အမှန်တရားမှာကိုးကှယျရမညျ" (:4ယောဟနျသ 24), ကဆိုသည်။ ဒီကြေညာချက် မှစ. ငါတို့သည်အရာသုံးခုကိုသင်ယူ:
1) ကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ်ပြုရေးတွင်လက်ျာအရာဝတ္ထု ... ဘုရားသခင်အားညွှန်ကြားရမည်,
မိမိအနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမှန်တရား (17 ယောဟနျသ 17) ဖြစ်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သည်သမ္မာတရားနှင့်ညီသညျဘုရားသခငျကိုကိုးကှယျဖို့, သူ့နှုတ်မြွက်တော်နှင့်အညီကိုပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်၌တွေ့ရှိခဲ့ဆိုကို item ဖယ်မထားရပါ, ကြှနျုပျတို့သညျမိမိနှုတ်ကပတ်တော်၌မတွေ့ရှိမဆိုကို item မပါဝင်ရပါမည်။
ဘာသာရေးကိစ္စရပ်များအတွက်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအား (25ကောရိန္သု 7) ကလမ်းလျှောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် (ရောမ 10: 17) ကြားနာခြင်းဖြင့်ကြွလာကတည်းက, သမ္မာကျမ်းစာအားဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရဘာမှယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှု ... သမျှယုံကြည်ခြင်းနှင့်မအပြစ်တရား (ရောမ 14: 23) ဖြစ်ပါသည်မရနိုင်ပါ။
ပထမရာစုဘုရားကျောင်းအားဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိဝတ်ပြုရာငါးပစ္စည်းများ, သီဆိုဆုတောငျးလကျြ, ဟောပြောပေးခြင်း, နှင့်သခင်ရဲ့ညစာစားပွဲမစားခဲ့ကြသည်။
သငျသညျခရစျတျောအသင်းတော်များနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းနေတယ်ဆိုရင်သင်ဖြစ်နိုင်ဤပစ္စည်းများကိုနှစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေ့အကျင့်အများဆုံးဘာသာရေးအုပ်စုများကနေကွဲပြားကြောင်းသတိထားမိကြသည်။ ဒီတော့ဒီနှစ်ခုမှာအာရုံစိုက်ဖို့ငါ့ကိုခွင့်, ကြှနျုပျတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဘို့ငါတို့အကြောင်းပြချက်ဖော်ပြ။
လူတွေအများဆုံးမကြာခဏခရစ်တော်၏အသင်းတော်များအကြောင်းကိုသတိပြုမိအရာတစျခုမှာကျနော်တို့ဂီတ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတူရိယာများအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲမနာသီချင်းဆိုကြောင်း - တစ် cappella သီချင်းဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ်ပြုရေးတွင်အသုံးပြုသောတစ်ခုတည်းသောဂီတပါပဲ။
ရိုးရှင်းစွာအဖော်ပြထားဒီမှာအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်: ငါတို့သည်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းကိုးကွယ်ခြင်းငှါရှာကြသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းဆာဂီတထွက်အရွက်, ဒါကြောင့်, ကျနော်တို့ကလက်ျာဘက်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံလွန်းသောကြောင့်ထွက်စွန့်ခွာဖို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကစက်မှုတူရိယာကိုအသုံးပြုခဲ့လျှင်ကျနော်တို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းအခွင့်အာဏာမရှိဘဲအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ရှိလိမ့်မယ်။
ဝတ်ပြုရေးတွင်ဂီတ၏ဘာသာရပ်ပေါ်တွင်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်သာ 8 ကျမ်းပိုဒ်ရှိပါတယ်။ ဤတွင်သူတို့နေသောခေါင်းစဉ်:
(26 မဿဲ 30) "သူတို့တစ်တွေဓမ္မသီချင်းသီဆိုပြီးမှ, သူတို့သည်သံလွင်တောင်သို့ထွက်သွားကြ၏" ။
(16 တမန်တော် 25) "သန်းခေါင်ပေါလုနှင့်သိလကိုဘုရားသခင်အားဓမ္မသီချင်း၌ဆုတောငျးလနှင့်သီဆိုခဲ့ကြသည် ... အကြောင်းကို" ။
(15 ရော 9) "ထိုကြောင့်ငါတပါးအမျိုးသားတို့ကိုယျတျောကိုခြီးမှမျး, သင်၏နာမကိုအမှီမှမနာသီချင်းဆိုပါမည်" ။
"။ ။ ။ ငါစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူမနာသီချင်းဆိုပါမည်နဲ့ကျွန်မလည်းစိတ်ကိုအတူမနာသီချင်းဆိုပါမည်" (1 ကောရိန္သု 14: 15) ။
(5 ဧဖက် 18,19) "။ ။ ။ သီချင်းဆို, ဆာလံသီချင်းနှင့်ဓမ္မသီချင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာသီချင်းများအချင်းချင်း addressing, ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ထာဝရဘုရားအားထောမနာသီချင်းဆိုမည်အောင်လိမ့်" ။
(3 ကောလောသဲ 16) "သင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးအဖြစ်ခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကြွယ်ဝစွာသင်၌ကျိန်းဝပ်စို့အပေါင်းတို့နှင့်ပညာ၌အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမ, သင်ကိုဘုရားသခင်အားစိတ်နှလုံးထဲ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်အတူဆာလံသီချင်းနှင့်ဓမ္မသီချင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာသီချင်းများသီခငျြးဆိုအဖြစ်" ။
(2 ဟေဗြဲ 12) "ငါဘုရားကျောင်းအလယ်၌ငါ့ညီအစ်ကိုတို့ထံသို့သင်၏အမည်ကိုကြေညာပါလိမ့်မယ်ငါကိုယ်တော်ထံသို့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမနာသီချင်းဆိုပါမည်" ။
"? ။ သငျသညျခံစားနေရပြီးသူ့ကိုဆုတောင်းစေအကြားတစုံတယောက်သောသူသည် Is မဆိုချိုသော Is သူ့ကိုထောမနာသီချင်းဆိုမည်စို့?" (ယာကုပ် 5: 13) ။
သမိုင်းကြောင်းအရ, ဘုရားကျောင်းဝတ်ပြုရေးတွင်ဆာဂီတ၏ပထမဦးဆုံးအသွင်အပြင်ဆဌမရာစုအေဒီသည်အထိမဟုတ်ခဲ့, ထိုသို့မရှိယေဘုယျလက်တွေ့အဋ္ဌရာစုပြီးနောက်သည်အထိရှိခဲ့သည်။
ဆာဂီတပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြောင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ယင်း၏မရှိခြင်းဂျွန်ကယ်လ်ဗင်ဂျွန်ယ်စလီများနှင့်ချားလ်စ် Spurgeon ကဲ့သို့သောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
သငျသညျခရစျတျောအသင်းတော်များနှင့်အခြားဘာသာရေးအုပ်စုများအကြားတစ်ဦးခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိကြပေမည်ရှိရာအခြားသောအရပ်သခင်ဘုရား၏ပွဲတော်မင်္ဂ၌တည်ရှိ၏။ ဤသည်အောက်မေ့ဖွယ်ညစာစားသည်သူ၏သစ္စာဖောက် (26-26 မဿဲ 28) ၏ညဉ့်တွင်သညျယရှေုအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာသခင်ဘုရားအသေခံ (1 11 ကောရိန္သု 24,25) ၏မှတ်ဉာဏ်အတွက်ခရစ်ယာန်များလေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ အဆိုပါအထိမ်းအမှတ်တွေကို - စပျစ်နွယ်ပင်၏တဆေးမပါသောမုန့်နှင့်အသီး - သညျယရှေု (1 10 ကောရိန္သု 16) ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အသွေးသင်္ကေတ။
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များကျွန်တော်အပတ်တိုင်း၏ပထမနေ့၌သခင်ဘုရား၏ပွဲတော်မင်္ဂစောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းများစွာထဲကနေကွဲပြားခြားနားပါသည်။ တနည်းကား, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏သင်ကြားမှုကိုလိုက်နာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဌာန်းခွင့်အတွက်အဓိက။ ဒါဟာပထမရာစုဘုရားကျောင်းများ၏အလေ့အကျင့်ဖော်ပြ, ကပြောပါတယ် "ထိုရက်သတ္တပတ်၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကအပျေါမှာတပည့်သည်မုန့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့စုဝေးရောက်လာကြ၏ ... ။ ။ ။ " (တမန်တော် 20: 7) ။
တချို့ကစာသားအပတ်တိုင်း၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကသတ်မှတ်မထားဘူးကြောင်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ဥပုသျစောငျ့ဖို့ command ကိုဥပုသ်နေ့ကိုသတ်မှတ်မပြုခဲ့သကဲ့သို့ - ဤစကားမှန်သည်။ အမိန့် (20 ထှကျမွောကျရာ 8) "သနျ့ရှငျးသောကြောင့်စောင့်ရှောက်ရန်ဥပုသျနေ့ကမှတ်မိသေး" ရိုးရိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ ယုဒလူတို့တိုင်းဥပုသျနေ့ကိုဆိုလိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်။ ဒါဟာတူညီတဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့် "ထိုရက်သတ္တပတ်၏ပထမဦးဆုံးနေ့ 'အပတ်တိုင်း၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကကိုဆိုလိုသည်ကိုပုံရသည်။
နောက်တဖန်, ငါတို့အဲဒီအစောပိုင်းရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာခရစ်ယာန်တိုင်းတနင်္ဂနွေသခင်ဘုရား၏ပွဲတော်မင်္ဂ ယူ. Neander နှင့်ယူစီးဘီးယပ်ကဲ့သို့သောလေးစားဖွယ်သမိုင်းပညာရှင်ထဲကနေငါသိ၏။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင် "ဘယ်လိုတဦးတည်းခရစ်တော်၏ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာပါသနည်း" အံ့သြနေကြတယ် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်၏စည်းကမ်းချက်များဘာတွေလဲ?
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များကိုအသင်းတော်သို့အတည်ပြုလက်ခံခြင်းတို့အတွက်နောက်တော်သို့လိုက်ရမည်ဖြစ်သည့်အချို့သောဖော်မြူလာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်၏စကားမပြောကြဘူး။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းခရစ်ယာန်တွေဟာဖြစ်လာမှထိုကာလ၌လူခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးသောအခြို့သောခြေလှမ်းများကိုပေးသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်တဲ့အခါမှာသူကအလိုအလြောကျဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
အလားတူယနေ့ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်များ၏မှန်သည်။ တဦးတည်းကိုအသင်းတော်သို့မဝငျခံရဖို့လိုက်နာရမည်ဖြစ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသို့မဟုတ်အခမ်းအနားများမရှိသီးခြားထားရှိပါသည်။ တဦးတည်းခရစ်ယာန်တစ်ဦးကိုသူဖြစ်လာတဲ့အခါ, တစ်ချိန်တည်းမှာ, အသင်းတော်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်ခြေလှမ်းဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်လိုအပ်သည်။
ကိုအသင်းတော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု၏ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွင်နောင်တနှင့်ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရသောသူတို့အား (2 တမန်တော် 38) ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့ကြသည်။ ထိုအ နေ့မှစ. သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြသည်သောသူအပေါင်းတို့ကိုအသင်းတော် (2 တမန်တော် 47) အားထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ် (တမန်တော် 2: 47) ၏အဆိုအရကဖြည့်စွက်ခဲ့တယျသောဘုရားသခငျဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤပုံစံကိုလိုက်နာခြင်းငှါရှာကြံအတွက်ကျနော်တို့ဘုရားကျောင်းသို့လူတွေကိုမဲပေးမမဟုတ်သလိုလေ့လာမှုတိုင်းရဲ့မရှိမဖြစ်တဲ့စီးရီးမှတဆင့်သူတို့ကိုအတင်း။ ကျနော်တို့ကယ်တင်ရှင်၎င်းတို့၏နာခံမှုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ ကျော်လွန်. ဘာမှမတောင်းဆိုဖို့မပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
1 (ရောမ 10 "ယုံကွညျခွငျးသညျဘုရားသခငျ၏တရားစကားကြားနာခြင်းဖြင့်ကြွလာ" အတွက်) တစျခု, ဧဝံဂေလိတရားကိုနားမထောင်ရပါမည်: 17) ။
2): 11) တစျ (ဟေဗြဲ6"ယုံကွညျခွငျးမရှိဘဲဘုရားသခင်နှစ်သက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး" ဟုအဘို့, ယုံကြည်ရပေမည်။
3) တစျသညျဘုရားသခငျအဘို့, အတိတ်အပြစ်များကိုနောင်တရမည်ဖြစ်သည် "လူအပေါင်းတို့အားပညတ်တော်မူ၏, every- ဘယ်မှာနောင်တရရန်" (တမန်တော် 17: 30) ။
4): 10) ဟုသူကပြောသည်ဘို့တ, သခင်အဖြစ်ယေရှုဝန်ခံရမယ် (မဿဲ 32 "သူကလူတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုဝန်ခံကြောင်း, သူ့ကိုငါသည်လည်းကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ့အဘကိုရှေ့တော်၌ငါဝန်ခံမည်" ။
5) ထိုအခါပေတရု (တမန်တော်2" ... နောင်တရ, သင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်သည်ယေရှုခရစ်၏နာမ၌သငျတို့ every- တဦးတည်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံရ" ဟုပြောသည်ဘို့တ, အပြစ်များကိုလွှတ်ဘို့အဗတ္တိဇံကိုပေးရမညျ: 38) ။
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များဗတ္တိဇံတရားရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းအပေါ်အများကြီးဖိစီးမှုကိုအားမရများအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်တော်တစ်ဦး "ဘုရားကျောင်းထုံးစံ," အဖြစ်ပေမယ့်ခရစ်တော်ရဲ့ command တစ်ခုအဖြစ်ဗတ္တိဇံကိုအလေးပေးကြပါဘူး။ (:; တမန်တော် 16 16: 2; တမန်တော် 38: 22 မာကု 16) သည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုကယျတငျတျောမူရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတခုလုပ်ရပ်အဖြစ်ဗတ္တိဇံသင်ပေးတယ်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းဗတ္တိဇံသာယုံကြည်ချက်နှင့် penitence အတွက်ထာဝရဘုရားအားဖွင့်သောသူသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုအဘို့ဖြစ်၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့မွေးကင်းစကလေးဗတ္တိဇံတရားကိုမကျင့်။ တစ်ဦးမွေးကင်းစကလေး၏နောင်တရရန်အပြစ်မရှိရှိပါတယ်, ပြီးယုံကြည်သူအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်၌လေ့ကငျြ့ဗတ္တိဇံ၏တစ်ခုတည်းသောပုံစံနှစ်မြှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဗတ္တိဇံရာမှဂရိစကားလုံး "ထိုးဖို့, ပေါင်းစည်းခွဲများမှ, ဗတ္တိဇံပေးရန်, ကျဆင်း။ " နည်းလမ်းကြွလာ ထိုအခါကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. အမြဲတစ်သင်္ဂြိုဟ် (:; 8; ကောလောသဲ 35: 39 ရော63,4-2 တမန်တော် 12) အဖြစ်ဗတ္တိဇံထောက်ပြ။
1) ဒါဟာနိုင်ငံတော်ကို (ယောဟန်3ရိုက်ထည့်ရန်ဖြစ်ပါသည်: 5) ။
2) ဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသည် (ရောမ6ဆက်သွယ်ဖြစ်ပါသည်: 3,4) ။
3) ဒါဟာခရစ်တော်အား (ဂလာတိ3သို့ရရှိရန်ဖြစ်ပါသည်: 27) ။
4) ဒါဟာကယျတငျတျောမူခွငျး (မာကု 16 အဘို့ဖြစ်၏: 16; 1 ပတေရုသ 3: 21) ။
5) ဒါဟာအပြစ်များကို (တမန်တော်2များ၏လွှတ်ဘို့ဖြစ်ပါသည်: 38) ။
6) ဒါဟာအပြစ်များကို (တမန်တော် 22 ပျောက်ဆေးကြောဖို့ဖြစ်ပါသည်: 16) ။
7) ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း (1 ကောရိန္သု 12 သို့ရရှိရန်ဖြစ်ပါသည်: 13; ဧဖက် 1: 23) ။
ခရစ်တော်သည်လောကီသားအပေါင်းတို့၏အပြစ်ကြောင့်အသေနဲ့သူ့ချွေတာရေးကျေးဇူးတော်၌မျှဝေဖို့ဖိတ်ကြားလူတိုင်း (တမန်တော် 10: 34,35; ဗြာ 22: 17) အားဖွင့်ကတည်းကကျနော်တို့မည်သူမဆိုကယျတငျတျောမူခွငျးသို့မဟုတျပြစ်တင်ရှုတ်ချဘို့ခွဲခန့်မှတ်သားကြောင်းယုံကြည်ကြဘူး။ တချို့ကယုံကြည်ခြင်း, နာခံမှုအတွက်ခရစ်တော်ထံသို့လာရန်ရွေးချယ်မည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ အခြားသူများကမိမိအအသနားခံငြင်းပယ်မည် (မာကု 16: 16) အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ။ သူတို့ရှုံ့ချဘို့မှတ်သားခဲ့ကြသောကြောင့်, ဤအဆုံးရှုံးခဲ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သို့သော်သူတို့ရှေးခယျြခဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လို့ပဲ။
သငျသညျနာခံမှုရှိသောယုံကြည်ခြင်း၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူဇော်နှင့်သူ၏ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု - သင်သည်ဤအခိုက်မှာနေရာတိုင်း, ငါတို့သည်သင်တို့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကယ်တင်ခြင်းကိုလကျခံဖို့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။